Midowga Musharaxiinta Oo Digniin U Diray Dowlada Federaalka. – Heemaal News Network
Midawga Musharrixiinta madaxweynaha dalka ayaa maanta Muqdisho ku yeeshay kulan horudhac u ah wejiga 2aad ee kulamada ay musharrixiintu ku dardar gelinayaan dadaallada ay ugu jiraan qabashada doorasho ka madax bannaan musuq iyo ku shubasho taas oo horseedda midnimo, horumar, barwaaqo iyo in natiijada lagu wada qanco.
Afhayeenka midawga musharrixiinta, Ridwaan Xersi Maxamed oo faahfaahin ka bixiyay natiijada kulanka iyo kulamo kale oo musharrixiintu la yeesheen madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug iyo machadka Heritage ayaa caddeyay in shirkooda diiradda lagu saaray hagaajinta hannaanka doorashada dalka.
Midawga musharrixiinta ayaa madaxweynaha Galmudug kala hadlay sida uu qeyb uga qaadan karo hir-gelinta hannaan ay dalka uga dhici karto doorasho xor iyo xalaal ah iyo in marxalada kala guurka looga gudbo wadatashi, wadar oggol iyo deganaan siyaasadeed.
Musharrixiinta oo dhaliilay hadallada xanafta leh ee kasoo yeeraya mas’uuliyiinta dowladda, ayaa dowladda federaalka xasuusiyay in laga sugayo qabashada doorasho nabad galyo iyo waqtigeda ku dhacdo, waxayna ku baaqeen in la joojiyo xasaradda laga dhex abuurayo dowlad gobaleedyad iyo dowladda federaalka ah si looga fogaado dhammaan arrimaha dib u dhaca keeni kara.
Musharrixiintu waxay ku baaqeen in loo midoobo sare u qaadidda amniga iyo in dowladdu ay muhiimadda 1aad siiso sugidda amniga inta lagu guda jiro xilligaan xaasaasiga ah ee dalku uu ku jeheysanyahay doorashooyinka.
Isticmaalka Lacagtii Hore Ee Itoobiya Oo Maanta la Joojiyay.
Booliiska Talyaaniga Oo Baaritaan ku Bilaabay Cristiano Ronaldo Iyo Xaaskiisa.